Rongqi သတင်း။ အတုသားရေအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။
1. PVC အတုသားရေ
၎င်းသည် Polyvinyl chloride ဗဓေလသစ်အရောအနှော၊ ပလတ်စတစ်နှင့်အခြားရှုပ်ထွေးသောအရာများ၊ အထည်တွင်အဖုံးအုပ်ထားသည့်သို့မဟုတ်လမိုင်းစသည်ဖြင့်အချို့သောအပြောင်းအလဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုအပြီးတွင်၊ ထို့အပြင်အခြေခံပစ္စည်း၏နှစ်ဖက်စလုံးသည်ပလတ်စတစ်အလွှာ၏နှစ်ဖက်စလုံး PVC အတုဖြစ်သည်။
2. Polyamide သားရေ
၎င်းသည်အထည်ကိုနိုင်လွန် ၆ (သို့) နိုင်လွန် ၆၆ ဖြေရှင်းမှုဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့်အဆက်မပြတ်ပူဖောင်းဖွဲ့စည်းမှုရှိသည့်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
3. Polyolefin အတုသားရေ
Polyethylene အတုသားရေသည်အမြှုပ်ထည်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သိပ်သည်းဆနည်းသော polyethylene resin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပြုပြင်ထားသော resin၊ crosslinking agent, lubricant, foaming agent နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ရောစပ်သည်
4. Polyurethane သားရေ
Polyurethane သားရေကိုခြောက်သွေ့သော polyurethane သားရေနှင့်စိုစွတ်သော polyurethane သားရေများအဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ ဒါခေါ်ခြောက်သွေ့သော polyurethane သားရေသည်အရည်ပျော်မှုအခြေခံသော polyurethane ဗဓေလသစ်ရည်ရည်ရည်ရည်သည်အလွှာပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှဖွဲ့စည်းထားသည့်အလွှာပါးလွှာသောမျက်နှာပြင်နှင့်အလွှာတို့ကိုတည်ငြိမ်စေသည်။ စိုစွတ်သော polyurethane သားရေသည်အလွှာပေါင်းစုံရှိသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဖြစ်ပြီးလေထုစိုထိုင်းဆကောင်းမွန်ပြီးအစိုဓာတ်ကိုစိုစွတ်စေနိုင်သည်။ အခြေခံပစ္စည်းအတန်းအစားကိုဝါဂွမ်းအခြေပြု၊ ဒြပ်ဖိုင်ဘာအခြေခံနှင့်ဖိုင်ဘာအခြေခံခွဲခြားသည်။ သူတို့တွင်ဝါဂွမ်းစည်များမှာရိုးရှင်းသောအထည်၊ အရောင်ချွတ်ထားသောအ ၀ တ်အထည်၊ ဆေးဆိုးသောအ ၀ တ်အစား၊ ဒြပ်အမျှင်အမျှင်ဝီကီတွင်ပိုးချည်ထားသော polyurethane သားရေနှင့်စိုစွတ်သောတစ်ခုတည်းသော polyurethane သားရေ၊ ဖိုင်ဘာထည်တွင်စက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော PVC သားရေနှင့်ရက်ကန်းသားရေများပါ ၀ င်သည်။
လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်အသုံးပြုသောအလွှာအမြောက်အများမှာဝါဂွမ်းအထည်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာ - လွင်ပြင်အထည်၊ အရောင်ချွတ်ထားသောအ ၀ တ်အထည်၊ ဆေးဆိုးသော၊ ရိုးရှင်းသောစည်၊ (ချည်မျှင်အမျှင်များအပါအဝင်) ချည်ထိုး၊ သိုးမွှေးအထည်၊ ရက်ကန်းထည်, etc ။ ; ဝါဂွမ်းနှင့်ဓာတုဗေဒအမျှင်ရောစပ်ထားသောအထည်ကဲ့သို့သောဝါဂွမ်းထိုးသည့်အထည်စသည်တို့အသုံးပြုမှုအနည်းငယ်သာဓာတုထည်များဖြစ်သောနိုင်လွန်ပိုး၊ ပိုလီစေးပိုးပိုးစသည်တို့။ ; ထိုအခါဒြပ်ဖိုင်ဘာ Nonwoven ထည်အလွန်နည်းပါးသည်။ တရုတ်၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့်ပွင့်လင်းလာမှုနှင့်အတူနည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့်ရေနံဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်းများလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဓာတုထည်နှင့်ဒြပ်အမျှင်မျှင်ထည်များသည်ကြာရှည်စွာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
1. Smear အတုသားရေခြစ်တိုက်ရိုက် Smear
Transfering scraping method ကိုလည်းသွယ်ဝိုက်ခြစ်တဲ့နည်းလမ်းလို့လည်းခေါ်တယ်။ လေယာဉ်တင်သူကစက္ကူဖြူ (သို့) သံမဏိခါးပတ်ကိုထုတ်ပေးတယ်။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းတင်လွှာပေါ်တွင် gelation ပြီးနောက်တင်းမာမှုပေါင်းစပ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်နောက်ကျော roller သို့မဟုတ်ခြစ်တင်သင်္ဘောပေါ်တင်ဆောင်ပေါ်, gelation ပြီးနောက်, ပြီးတော့အခြေစိုက်စခန်းအထည်နှင့်အတူငါးပိ, ပြီးတော့ပလတ်စတစ်, အအေးနှင့်အခွံနှင့်ပြီးတော့ ချောထုတ်ကုန်ရဖို့ကုသမှုပြီးနောက်။
ပုံသေနည်း၏လိုအပ်ချက်များအရ, အစေး, ပလပ်စတစ်နှင့်အခြားရှုပ်ထွေးသောတိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် kneader ထဲတွင်အညီအမျှရောနှောပြီးနောက်ထို့နောက်သိပ်သည်းသောရောနှောသို့မဟုတ် extruder အတွက် plastised, ပြီးတော့ preheated အခြေခံအထည်နှင့်တပ်ဆင်သောလိုအပ်သောအထူနှင့်အကျယ်၏ရုပ်ရှင်သို့ calded ခံရဖို့နှစ်ခု roller သို့မဟုတ်လေး roller calender မှစလှေတျ, ပြီးတော့ဖောင်းကြွ နှင့်ချောထုတ်ကုန်ရဖို့အအေး။
အဆိုပါအစေး, ပလပ်စတစ်နှင့်အခြားရှုပ်ထွေးသော kneader အတွက်အညီအမျှရောနှော, ထို့နောက်ပလပ်စတစ်, extruder အားဖြင့်အချို့သောအထူနှင့်အကျယ်တစ်ရုပ်ရှင်သို့ extruded, ပြီးတော့နှစ်ခု-roller setting ကိုစက်ပေါ်တွင် preheated အခြေခံအထည်နှင့်အတူကပ်လျက်တည်ရှိ, ပြီးတော့ preheated ဖုတ်ထားသောနှင့်အအေး။ ချောထုတ်ကုန်ရယူပါ။
ပုံသေနည်းမှပြင်ဆင်ထားသောဆေးကြောထားသော polyvinyl chloride ငါးပိအစေးကိုခြစ်။ အသုံးပြုပြီးသားရေထုတ်လုပ်ရန်ပတ် ၀ န်းကျင်အ ၀ တ်အထည်တစ်ခုပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
အဆိုပါလုပ်ရပ်အောက်ပါလုပ်ရပ်၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို polyphthalamine art leather သို့ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ဤနည်းသည်စိုစွတ်သော polyurethane သားရေ၊ polykuramine သားရေစသည်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်သင့်လျော်သည်။ သားရေကိုအများသုံးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲခြားနိုင်သည်။ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ မြို့ပြသားရေ - ဖိနပ်ခံသားရေ၊ အဝတ်အထည်သားရေ၊ သေတ္တာသားရေ၊ အိတ်သားရေ၊ သားရေ၊ လက်အိတ်ကား၊ ပရိဘောဂမြက်စသည်တို့။ စက်မှုသားရေ - မော်တော်ယာဉ်သားရေ၊ ကြမ်းပြင်သားရေစသည်။